ktmkhabar.com - करुणा अस्पतालद्धारा एनआईसियु र प्रशुती सेवा सुरु
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्वर १३, चुनिखेल टुपेकमा रहेको करुणा अस्पतालले शिशु सधन उपचार कक्ष (Neonatal Intensive Care Unit -NICU) र प्रशुती कक्ष (Labor Room) सेवा सुरु गरेको छ ।
सोमबार नेपाल बौद्ध महायान केन्द्र, कपन गुम्बाका खेन्पो गेशे थुप्तेन छीङीले करुणाको शिशु सधन उपचार कक्ष र प्रशुती कक्षको उद्धघाटन गरेको हुन् । साथै उहाँसँगै अरु भिक्षुहरुबाट प्राण प्रतिष्ठान पुजा गर्दै उपचार गर्नुपर्ने शिशुहरुको शिघ्र स्वास्थय लाभ र आमा तथा शिशु दुबैको सु–स्वास्थयको लागि प्रार्थना गर्नुभएको अस्पतालका बालरोग प्रमूख डा. भावुक शर्मा मजगैंयाले बताउनु भयो ।
उक्त उद्घाटन कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष तिर्थ लाल श्रेष्ठले अस्पतालले नेपालमा पहिलो पटक पानीमा बच्चा जन्माउने प्रविधि भित्राउन लागेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै दुखाईमुक्त प्रविधिबाट गरिने (Epidural Painless labor) प्रशुती भने सुचारु गरिएको श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ।
दुखाईमुक्त प्रविधिबाट गरिने प्रशुती ढाडमा सुई लगाई प्रशव व्यथाको दुखाई कम गरि प्राकृतिक तवरबाट नै प्रशुती गराइन्छ अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकद्धय डा. गहना गुरुङ र डा. सलुजा श्रेष्ठ बताउनु हुन्छ ।
शिशु सधन उपचार कक्ष (NICU) मा भर्खर जन्मेदेखि १ महिना सम्मका शिशुहरुको उपचार गरिन्छ । नेपालमा अहिले पनि महिना दिन नपुगी ज्यान जाने बच्चाहरुको उनलेख्य संख्या रहेको र यस एनआईसियु स्थापनसँगै केही मात्रा भएपनि ज्यान जोगाउन सकिने छ । करुणा अस्पतालले संचालन ल्याएको एनआईसियु उच्च प्रविधि युक्त उत्कृष्ट रहेको बालरोग विशेषज्ञ डा. सेसन प्रजापति बताउनु हुन्छ ।
एनआईसियु भित्र सानो भन्दा सानो वजन भएका बच्चालाई पनि हुने भेन्टिलेटर देखि लिएर वजन कम तथा उमेर अगावै जन्मिने (Preterm Low Birth Weight) बच्चाहरुको लागि छुटै केविन (Isolated Cabin), जन्डिसको लागि निलो बत्तिले सेक्ने फोटोथेरापी (Ultraviolet Phototherapy ) , श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनेहरुको लागि Bubble CPAP मेसिन लगायत मोनिटर Radiant Baby warmer युक्त छन् । बच्चाको उपचारमा कुनै कसर नछाड्नको लागि बतानुकुलित वातावरणको साथै संक्रमण घटाउन वा एक अर्कामा नसार्नको लागि Negative Pressure को व्यवस्था गरेको अस्पतालका चिफ अप्रेसन मेनेजर डा. शोभा महर्जनले बताउनु भएको छ ।
तस्विर श्रोतः विकास सिंह लामा र करुणा अस्पताल